Kaayyoon Keenya Fayyaa Ummata Keenyaa Eeguu dha : Waldaa WALIIF
Waldaa Aksiyoona Fayyaa Oromiyaa keessatti tajaajiila eegumsa fayyaa uummanni akka argatu gochuuf bara 2016 keessa hundeeffame.Ogeessoota tajaajiila eegumsa fayyaa kan gosa adda addaa kan of-keessaa qabu waldaan Aksiiyoona Fayyaa WALIIF mana qorichaa itti gurguran ykn Faarmaaasii 6 banee hojjachaa kan jiru ta’u dhiyeenyattis kanneen biroo sadii banuuf ka jiru ta’u ibsamee jira.
Kana malees Kooleejoota ammaan dura leenjii tajaajiila eegumsaa fayyaa kennaa turan sadii bitee leenjiisa eegumsa fayyaa kan sadarkaa adda addaa barattotaaf kennuu jalqabuuf kan jiru ta’u hojii gaggeessaa kan ta’an Obbo Warqinaa Guddisaa ibsanii jiru.
Koleejoota bananii leenjii eegumsa fayyaa ka sadarkaa adda addaa kennuu, lafa qoricha itti gurguran ykn faarmaasii banuu, Waaltaa qorannoo qophesssuu dhibee qaama keessaa qopheessu akkasumas meeshaalee wal’ansa fayyaa dhiyeessuu irratti akka hojjatu ibsamee jira.
Kaayyoon Waldaa Kanaa yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti Hospitaalota Sadarkaa olaanaa Finfinnee fi Godinaalee fi bulchinsa Maagaalota Oromiyaa mara keessatti banuu, Faarmaasiwwan 40 Oromiyaa mara keessatti banuu, manneen barnootaa eegumsa Fayyaa banuun leenjisuuf waldaa Socho`aa jiru ta’uun ibsamee jira.
Oromoota bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa buqqa’anii mooraa keessa turaniitti WALIIF tajaajiila eegumsa fayyaa fi kanneen biroo gochaa akka ture kan ibsan Obbo Warqinaan dhiyeenya kana uummata Oromoo bulchiinsa naannoo Beneshangul Gumuz irraa dheessaniifis deggersa gochuu isaa ibsan. WALIIF xiqiin uummata isaaf kan huneeffamee ta’u fi hirmaannaan abbotii qabeenyaa fi ogeessoota adda addaa kan isan barbaachisu ta’u ibsamee jira.
Oromoonni biyya alaa fi biyya keessa jiran kanneen Aksiyoonii bitachuun uummata tajaajiiluun ofiis bu’a keessaa argachuu qaban kanneen galma’an xiqqaachuun hojii karoorfame guutummaatti hojii irra olchuuf danqaa ta’uun ibsamee jira.
Gaaffii fi deebii Kutaa 1ffaa Caqasaa
Kutaa 2ffaa: Kaayyoon Keenya Fayyaa Ummata Keenyaa Eeguu dha - Waldaa WALIIF
Hoogganni Tigraay Waraana Tuqachuu Haa Dhaau: M.N AmaaraaUummati Tigraay Obboleessa Isaa Kan Amaaraa Loluuf Akeeka Hin Qabu: M.N Tigraay
Afrikaan Gabayaa Tokko Waliin Qabaachuuf Hujii Bara 2018 Keessa Jalqabde Durumattiin Deemuutti Jirti
Woorkshooppiin Qulqullina Barnootaa Irratti Fuuleffatu Finfinneetti Geggeessamaa Jira